Abuuritaanka Websaydh Soo Galaya 2014 | Martech Zone
Toddobaad kasta oo ku saabsan Edge-ka Webka Raadiyaha Podcast, Erin iyo anigu waxaan adkeyneynaa in khaladka shirkadaha badankood ay qabaan ay tahay inay rumeysan yihiin in boggooda uu yahay buug-yare internetka ah halkii uu ku noolaan lahaa, iibiyaha neefsashada ah. Markay bartaadu soo saareyso nuxur aad ufiican oo dhawaanahan, soo noqnoqda oo laxiriira… aad dhisid xawaare iyo ka caawi dadka inay ku rumeeyaan iyo alaabtaada ama adeegyadaada.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in aanan rumaysan soo galid waa bedel bannaanka xeeladaha iibka iyo suuqgeynta. Shirkado badan ayaa labadooda iska horkeena laakiin markii ay isla shaqeeyaan, waa wax aad u qurux badan!
Waa tan infographic ka socda Suyati suuq geynta, waxa aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u hubiso in websaydhkaagu ku soo galo booqdayaasha sanadkan:
Qofka iibsadaha ah si aad u go'aansato sida aad ula macaamili doonto nooc kasta oo soo booqde ah.
Waxyaabaha fudud vs content sare ee dheefshiidka fudud.
Istaraatijiyadaha dallacsiinta leh SEO, PPC, Blogs, Warbaahinta Bulshada, Martiqaadyada Webinar.
Baaq-ficil (CTAs) si loogu booqdo martida qoto dheer bogagga degitaanka.
Goobaha Bogagga si loo wado beddelaad.
Kordhinta Lead si loogu hago martida inay noqdaan macaamiil.
Hubso inaad iskaqorto koorsada shilka Suuq Inbound tabka bidix, waa koorso 5 usbuuc ah oo kugula socon doonta dhammaan dhinacyada istiraatiijiyadda suuq geynta ee guuleysta.
Daah-: Suuyaati waa shuraako naga ah at DK New Media - waxay naga caawiyeen dhinacyo badan waxayna leeyihiin qalab cajiib ah oo loogu talagalay soosaarida maareynta iyo maaraynta habka loo yaqaan Voraka in aan wax ka qori doono.
Tags: hubkaaBlogsqof iibsadaha ahwac talaabowicitaan ficilctamarketing inboundbogga soo galahagaajinta barbaarintaSuuqgeynta Webinarsuuq geyn dibedda ahppchorumarintaSEOwarbaahinta bulshada